Bit By Bit - Kubvunza mibvunzo - 3.4.1 fungidziro zvakabudiswa: date muunganidzwa uye mashoko ongororo
Zviidzo anogona kugadzirisa nokumonyaniswa nemaune anokonzerwa zvakabudiswa rikurumidze.
Fungidziro mimwe ndivo avo apo vanhu vose vane anozivikanwa, asiri razero ndingangokuvara hwepamusoro, uye nyore mukana zvakabudiswa Magadzirirwo nyore kurongwa zvakabudiswa apo mumwe munhu ane vakaenzana ndingangokuvara usanganidzo. Kana vakabvunzwa vanosarudzwa Via nyore kurongwa zvakabudiswa hwakakwana kuurayiwa (semuenzaniso, hapana nhau kukanganisa uye asina asiri response), zvino iwe akananga nokuti mharidzo zvichaita-paavhareji-kuva maduku shanduro vemo.
Simple kurongwa zvakabudiswa haawanzopiwi Zvisinei kushandiswa tsika,. Asi, vanotsvakurudza nemaune sarudza vanhu vane dzisakarurama fungidziro unyorwe kuitira kuderedza mari uye kuwedzera kururama. Apo vanotsvakurudza nemaune sarudza vanhu vane siyana fungidziro unyorwe, ipapo kugadzirisa zvinodiwa chokubvisa nokumonyaniswa anokonzerwa zvakabudiswa rikurumidze. Nemamwe mashoko, sei isu generalize kubva mharidzo zvinoenderana sei mharidzo akasarudzwa.
Somuenzaniso, Current Population Survey (CPS) rinoshandiswa nehurumende US kuti vanofungidzira urovha unodiwa. Mwedzi mumwe nomumwe vanhu vanenge 100,000 vari vakabvunzurudzwa, kana chiso nechiso kana parunhare, uye migumisiro zvinoshandiswa kubudisa pakukosha urovha unodiwa. Nekuti hurumende achida vanofungidzira kwemabasa mwero mumwe mamiriro, haikwanise kuita nyore kurongwa nzwisa vakuru nokuti izvozvo richabereka vakabvunzwa zvakare vashoma inoti pamwe nevanhu diki (semuenzaniso, Rhode Island) uye vakawanda kubva inoti makuru vakawanda (eg , California). Asi, CPS ivhu vanhu dzakasiyana inoti panguva dzakasiyana rates, muinonzi stratified zvakabudiswa pamwe dzisakarurama ndingangokuvara kusarudzwa. Somuenzaniso, kana CPS vaida 2,000 vakabvunzwa por mamiriro, ipapo vakuru muRhode Island aizofanira nezvenguva 30 yepamusoro ndingangokuvara nechekuita mukugarisana kupfuura vakuru muCalifornia (Rhode Island: vakabvunzwa 2,000 paminiti vakuru 800,000 Vs California: vakabvunzwa 2,000 paminiti vakuru 30,000,000). Sezvatichaona gare gare, mumwe zvakabudiswa pamwe dzisakarurama fungidziro urwu zvinoitika pamwe paIndaneti manyuko mashoko zvakare, asi akasiyana CPS, iyo zvakabudiswa mashandiro inowanzopiwa usingazivi kana raitungamirwa mutsvakurudzi.
Akapiwa rayo zvakabudiswa magadzirirwo, iye CPS haasi zvakananga mumiririri US; rinosanganisira vanhu vakawanda vaibva Rhode Island uye zvishomanana kubva kuCalifornia. Naizvozvo, hakusi kuchenjera kuti vanofungidzira kwemabasa mwero munyika pamwe kwemabasa mwero mharidzo. Pane mharidzo Zvichakadaro, zviri nani kutora weighted zvinoreva apo Zviidzo chikonzero ndechokuti vanhu vanobva Rhode Island vava kuva pane vanhu kubva kuCalifornia. Somuenzaniso, mumwe munhu wokuCalifornia vaizova upweighted- vaizova kuverenga zvakawanda vanofungidzira-uye mumwe munhu kubva Rhode Island hwaizosimbiswa downweighted-vangadai kuverenga zvishoma muna vanofungidzira. Chaizvoizvo, imi vakapiwa inzwi vanhu kuti imi kashoma kudzidza pamusoro.
Uyu toyi muenzaniso unoratidza inokosha asi zvinowanzonzi kunzwisiswa pfungwa: muenzaniso haafaniri kuva maduku shanduro chavagari kuti kubereka kufungidzira zvakanaka. Kana zvakakwana chinozivikanwa pamusoro sei mashoko ikaunganidzwa, zvino kuti mashoko anogona kushandiswa apo achiita nokufungidzira kubva mharidzo. The kusvika ndava chete zvinorondedzerwa-uye kuti ini anorondedzera nyanzvi mune hwokugadzira okuwedzera-anowa tinotsigira mukati dzenhoroondo mukana zvakabudiswa framework. Zvino, Ndichakuratidza kuti rimwechetero rinokwanisa kushandiswa vasiri fungidziro ivhu.